बादलले बैद्यलाई कारबाही गर्ने ? | My News Nepal
बादलले बैद्यलाई कारबाही गर्ने ?
काठमाडौं । पार्टी एकतालाई लिएर चर्चा चलिरहेका बेला एकीकृत माओवादी र नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)बीच झनै अन्यौल बढेको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहित नयाँ सरकार बनाउन व्यस्त रहेकाले तत्काल एकता प्रक्रिया अन्यौलमा परेको स्रोतको भनाइ छ । एमाओवादीसँग नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष मोहन बैद्य सकारात्मक छैनन् । तर, रामबहादुर थापा बादल भने बैद्यलाई छाडेर भएपनि अध्यक्ष दाहालसँग मिल्न जाने पक्षमा छन । उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई भन्दा पनि माओवादी पार्टीलाई जीवन्त बनाउन खोज्दा उनको पार्टी एकीकरणको विषयले खासै स्थान पाउन नसकेको पनि बताइन्छ । बैद्यले पार्टी एकीकरणकै विषयमा बिबाद भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक महिनाका लागि स्थगित गरेका थिए ।
बैठक वैशाख २८ गतेका लागि बोलाउनु पर्ने हो । तर, बैद्यले अहिलेसम्म बैठक बोलाउने सुरसार गरेका छैनन् । बैद्यलाई तह लगाउन बादलले वैशाख २७ गते केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सम्पर्क गर्न लगाएका छन् । यदि, अध्यक्ष बैद्यले केन्द्रीय कार्यसमिति नबोलाएमा थापाले आफ्ना समूहका सदस्यहरुलाई सहभागी गराई वैशाख २८ गते बैठक बोलाएर अध्यक्ष बैद्यलाई कारबाही गर्ने योजनामा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
बादल जसरी हुन्छ एकीकृत माओवादीमा बिलय हुन चाहन्छन् । नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)मा बैद्य अल्पमतमा रहेको स्रोतको दाबी छ । बादल बहुमतमा रहेकाले बैद्यलाई सधै अप्ठेरोमा पार्ने गरेको बताइन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै पार्टी एकीकरण नहुने थाहा पाएपछि बैद्यले बादललाई देखाइदिने भएका छन्,यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । । अब यस्तै अवस्था रहे बैद्यले बादललाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्काषन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।